Koroonaavaayirasii: Hammeenya koronaavaayiras maatii dhukkubsattootaa irraa - BBC News Afaan Oromoo
Lammiileen Chaayinaa lama torbanoota duraa weerarri dhukkuba kanaa itti ka'ee keessa miseensoota maatii dhukkubsataniif qorichaafi siree argachuun attam cimaa akka ture akkasiin BBC'tti himan.
Torbanootuma vaayirasii haaraan badiinsa lubbuu namoota hedduu jiddugala bulchiinsa Chaayinaa kan taatee Hubee mudachuun gabaafameen boodatti ture aanga'oonni haala itti namoota vaayirasichaan faalaman murteessan irratti jijjirama taasisan.
Lakkoofsi namoota vaayirasichaan faalamaniis guyyaa gara guyyaatti dabalaa dhufe.
Jalqabarrattis keessattuu magaalaa Wuuhaaniitti namoota vaayirasichaan qabaman wallaanuuf hanqinni siree hospitaalaa mudatee ture.
Jiraattoonni Magaalaa Wuhaan lama magaalaa dhukkubsattootaan guutamte keeaasstti maatii isaanii dhukkubsataniif siree argachuun hagam takka rakkisaa akka ture mudannoo saanii BBC'tti himaniiru.
'Akaakayyu nagaan boqadhaa' - Xi'aa Huwaang
Hawaangi wayita inni daa'ima tureetti maatiinsaa waan irraa du'aniifu, kan isa guddise akaakayyuu isaa turan.
Bara jireenyaa isaatti kan barbaadaa tures, akaakayyuuwwan isa guddisan kan umurii 80n keessatti argaman bara sooramaa isaaniitti boqochiisuu ture.
Itoophiyaan eeruuwwan koronaavaayiras 39 sakatta'uu himte
Chaayinaan appii namni koroonaavaayirasiif saaxilamaa tahuu adda baasu hojjette
Haa ta'u malee akaakayyuun isaa vaayirasichaan kan ajjeefaman yoo ta'u, akkoon isaas haala dhukkubbii cimaa keessa jiraachu hima.
Huwaan akka jedhuutti maatiinsaa lamaanu guyyaa Amajjii 20 dure mallattoonni rakkina argansuu kan irratti mul'atee ture. Magaalatii keessatti tajaajilli geejiba ummataa waan dhaabateef hanga Amajjii 26 mana yaalaa dhaqu hindandeenye ture.
Hospitaala gahan illeen sirree argatanii akka cisan kan taasifame guyyaa sadiin booda gaafa Amajjii 29 ta'u hima.
Kunis hospitaalli dhukkubsattootaan guutame waan tureef sireen hinturre. Maatiin isaa garuu ho'iina qaamaa cimaafi rakkina afura baafachutiin rakkataa turan jedha. Akkas ta'ulleen bakka irra taa'aniitu kutaan alatti kennameef malee bakka sirri argachu hindandeenye.
Booda keessa hojjattoota hospitaalaa kadhannaa guddina teessuma dheeraa fi siree dacha'u tokko argachuun irra cibsee.
Haa ta'u malee ''doktarri ykn narsiin mul'atan kamii hinturree,'' jedha Huwaangi. ''Hospitaalli hakimii malee ammo lafa ekeeraati,'' jedha.
Alkan kaakayyuunsaa boqatan sana koridarii irra cistee kan turte akkaayoon isaan, abbaan manaa ishee du'atti dhiyaachu hinbeektu turte jedha.
Dhumarrattis akaakayyuun isaa lubbuun keessaa bahuuf sa'aatiin sadii yoo haafu siren kennameef. Huwaangis hanga dhumaatti isa bira akka ture hima.
Akka midiyaa hawaasaa Chaayinaa Weyibo jedhamurratti barreesseetti, ''Akkaa nagaan boqadhaa maaloo. Ganatiitti dhukkuubbiin hinjiru,'' jedhe ture.
''Maatii hedduunis osoo wali hinargiin ykn miiltoo fira tokkoo osoo hinargatiin du'aa jirau,'' jechuun haalli biyyattii keessaa maal akka fakkaatu ibsa.
Akaayoon isaa ammalleen hospitaala keessatti kan argamtu yoo ta'u, hanga danda'ameefiitti yeroo isaa ishee waliin dabarsaa jiraachu dubbata.
''Qorichi bu'aa gaarii argamsiisu hinjiru. Hakimoonnis qorichatti abdii godhachurra ofuma isheetiin tarii du'arraa hafu akka dandeessu natty himan,'' jedha.
''Kanaafu carraan qofti akka murteessuuf eegaa jirra.''
Erga Guraandhala 7 kaasee ammo Huwaangi mataansaatu waan dhukkubsateef, turban lamaan darbaniif hooteela keessatti akka hinsochoonee taasifameera.
'Dhiiga tufuu eegalte'- Daa Chuun
Haatii Daa Chuun ho'iinsa qaamaan kan qabaman jalqaba baatii Amajjiitti ture. Maatiin waan hubannoo omaa hinqabneefu, qofaatu qabe se'an ture jedha.
Waa'ee vaayirasichaa kan dhagahan booda keessa ture.
Haatii kunis kilinikaa naannoo dhaquun talaallii fudhatan illeen gubaan qaamaa gadi bu'uu hindandeenye. Guyyaadhuma aanga'oonni Chaayinaa koronoovaayirasiin namootatti kan darbu ta'u mirkanneessan sanatti gara kilinika namoota mallattoo wal fakkaatu qabaniif qophaa'eetti geessuu dubbata Chuun.
Qorannoo erga gaggeessaniin boodas hakimoonni haatiisaa vaayirasichaan qabamu itti himan.
''Hanga guyyaa sanatti hin amanneen ture,'' jedha Daa Chuun.
Booda ammo haatiisaa kan umuriin waggaa 53 hospitaala sana cisuu akka hindandeenye itti himame. Wallaansi namoota akka siheef kennamu kan argamu hospitaala saddeetii kanaaf ramadaman qofatti ta'uun itti himame.
''Hopitaalichis namoota ciisuu qaban kan murteessu komishinii fayyaa naannichaa waan ta'eef, haadhasaa cibsuuf aangoo akka hinqabne natty himan,'' jedha dargaggoon waggaa 22 kun.
Wayita sanattis taateen kun kan haadha isaa qofa osoo hintaane kan miseensoota maatii kanneen dhukkubbi walfakkaatu keessatti argamaniis ta'u, karaa appii WeChat jedhamuutiin waliin dubbachaa akka haalicha hubate hima.
Hosipitaaloota keessa sireen jiraachu ilaaluuf obboleessi isaa deemuun hiriiraa oolaa ture jedha Chuun. Inni ammo haatiisaa akka gulukoosii argattuuf kilinikii dhiheenyatti argamuutti geessaa ture.
Tibba kanattis namoonni osoo tajaajila wallaansaa hinargatiin buuftaalee wallaansaa keessatti du'aa akka turan argu dubbata.
''Reeffi namootaas hojjattoota hospitaalaan maramee kaafama,'' jedha. ''Isaanis akka waan sababii vaayirasichaatiin du'aniitti lakkaa'amiifi dhiisanii hinbeeku,'' jedha.
Haalli haadha isaas waljalaan itti cimaa adeemu dubbata. Isheenis dhiiga tufuu eegalt. Akkasumas fiincaan ishees dhiiga makate, jedha.
Amajjii 29'tti sireen argamee ciistuulleen, hospitaalichi meeshaa gahaa waan hinqabneefu guyyoota duraa siree qabatteetti tajaajila wallaansaa omaa hin argannee turte jedha. Haati isaa akka bayyanachu dandeessu ilaalchisees abdiin omtu akka hin kennamneef hima.
Daa Chuun fi Huwaang lamaan wayita BBC'tti dubataniitti midiyaa hawaasaa isaanii fayyadamuun ture.
Koronaavaayiras: Itoophiyaan eeruuwwan koronaavaayiras 39 sakatta'uu himte